बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हैन लिंग काटेर संग्रहालयमा सजाउनु पर्छ ! — प्रीति रमण || विचार
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हैन लिंग काटेर स...
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हैन लिंग काटेर संग्रहालयमा सजाउनु पर्छ ! — प्रीति रमण
access_time 03 Jun 2022
मैले करिव दुईवर्ष अगाडि जनधारणा साप्ताहिक र धारणान्यूज डटकम अनलाईनमा प्रकाशन गरेको यो लेख आजको परिप्रेक्षमा सामयिक भएकाले पुन: प्रकाशन गरेकी छु ।
मेरो विचारमा मृत्युदण्डको सजाय बलात्कारको घटनामा प्रभावकारी हुन सक्दैन । आफू स्वयम् पनि कानून व्यवसायी महिला भएका नाताले यो दावी गर्न सक्दछु । मृत्यु दण्डको सजाय अदालतबाट तोकिँदासम्म बलात्कारीले आफू बच्ने तमाम् उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा मृत्यु दण्डको कानूनी प्रावधान प्रभावकारी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले पनि बलात्कारीलाई घटनास्थलमै कारवाही गर्ने अधिकार पीडित पक्षले पाउनु पर्छ भन्ने पंक्तिकारको तर्क हो । बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको सजायको व्यवस्था छिमेकी देश भारतमा भर्खरै कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ कि यो कानून प्रभावकारी भइरहेको छैन । मृत्यु दण्डको कानून कार्यान्वयन भइसकेपछि पनि भारतमा बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले मृत्यु दण्ड भन्दा प्रभावकारी दण्ड बलात्कारीको लिंङ्ग काटेर संग्रहालयमा सजाउनुमै हुनेछ ।
त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ, जसका कारण मृत्यु दण्डको सजाय दिने कानून बनाउन सकिदैंन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताका सन्धिहरुमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले पनि मृत्यु दण्डको सजाय नेपालको संविधानले गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर बलात्कारीको लिङ्ग काटेर संग्रहालयमा सजाउने कानून बनाउन संविधानले रोक लगाएको छैन । यो कानून नै नेपालको लागि सबै भन्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।-(सन २०२० अक्टुवर १ को जनधारणा साप्ताहिकबाट)
दुईवर्ष अगाडि के सुझाव भयो ? मलाई जानकारी छैन । तर अहिले पनि संसद बैठक चलिरहेको छ,बलात्कारका घटनाहरु झनै डरलाग्दा प्रकृतिका सार्वजनिक भैरहेका छन् ।बलात्कारलाई बिल्कुलै निरुत्साहित गर्ने यस्तो प्रभावकारी कानून बनाउन किन नसकिने ?